Bazobuyela ejokeni abasemapulazini
Johannesburg - Balinganiselwa ku-1 500 abasebenzi abatelekile basemapulazini okulindeleke ukuba babuyele amsebenzini eDe Doorns kulelisonto, kusho inyunyana iFood and Allied Workers' Union (Fawu) ngoLwesibili.
Cape Town - UNobhala Jikelele wayo uKatishi Masemola uthe sebeceliwe abasebenzi ukuba babuyele emsebenzini ngoLwesithathu ekuseni, njengoba kusaqhubeka izingxoxo zamaholo.
"Sicela bonke abasebenzi abanesifiso sokubuyela emsebenzini ukuba bavunyelwe nalabo abahlala emapulazini bavunyelwe ukuba babuyele ezindlini zabo. Ngamafuphi nje, asikho isisebenzi okumele sixoshwe futhi bonke abaxoshiwe kumele bakuthathe njengento engekho lokho."
UMasemola uthe isinqumo sithathwe emhlanganweni omkhulu obungoMsombuluko ebusuku.
Abasebenzi basemapulazini eWestern Cape bangenele isiteleka ngonyaka odlule, bafuna ukuhola u-R150 ngelanga njengoba behola ku-R69 ngelanga.
Isiteleka samiswa ngoDisemba, kodwa saqala phansi cishe emasontweni amabili edlule ezindaweni ezahlukene esifundazweni.
Sekube nokushayisana mayelana nokumele kwenzeke njengoba phakathi kwezinye izinyunyana kanye nabaholi bomphakathi kukhona abathi asimiswe isiteleka nabathi asiqhubeke kuze kube abasebenzi bayakuthola lokho abakufunayo.
Ebuzwa ukuthi iFawu isicelo sayo izosidlulisela yini nakwezinye izindawo, uMasemola uthe kuzoya ngokuthi abasebenzi bathini bona.
"Inkinga bekungukuthi kuphuma imiyalezo eyahlukene futhi baningi abakhulumayo. Lokhu kwenza badideke abantu. Kuzomele siqale sihlangane namalungu ethu kulezo zindawo," usho kanje.